5 Tips Fa mpitety By Train In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Tips Fa mpitety By Train In Eoropa
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 18/02/2020)
jereo sy traikefa toy izany bebe kokoa amin'ny alalan'ny nirotsaka amin'ny fiaran-dalamby Eoropa traikefa nahafinaritra. Nandeha lamasinina any Eoropa no quintessential fomba for nitsidika Europe ary tsy zava-miafina ny antony. The rail Network dia Lasa mpitety tany tena toy izany dia afaka mandresy firenena sy kolontsaina maro ao amin'ny iray lava diany. Toy ny amin'ny endriny rehetra ny mandeha, dia tsara ny manomana ny tenanao mba ho azo antoka fa manana ny mora indrindra sy mahafinaritra indrindra dia azo atao. Ireto ny 5 toro-hevitra noho ny mandeha lamasinina any Eoropa.
Raha Mandeha Etsy Ambony 14 andro – Fikarohana samihafa lalamby mandalo
Raha toa ianao mihevitra ny hahita firenena maro Nandeha lamasinina any Eoropa dia mety ho fahendrena ny mihevitra mampiasa vola amin'ny Interrail Pass, na izay tsy miantso ny EU olom-pirenena Eurail. An Interrail Pass hahatonga ny fiaran-dalamby Tsidika mora kokoa. Na izany aza, raha amin'ny Nihamafy teti-bola, tapakila tsirairay avy dia mety miasa mora (indrindra indrindra raha mandeha atsinanan'i Alemaina). Diniho ny teti-bola sy manao fikarohana eo anatrehanao ny lalamby handalo boky. Our website saveatrain.com no tonga lafatra toerana mba hanomboka hanampy drafitra ny diany manerana an'i Eoropa.
Miezaha mba hamandrika ny toerana
Train tapakila ary ny seza famandrihan-toerana dia zavatra roa samy hafa. Ny tapakila dia mamela anao hiditra ao amin'ny fiaran-dalamby, ary ny famandrihan-toerana miantoka anao ny seza eo amin'ny fiaran-dalamby manokana. Talohan'ny ny diany ho azo antoka anao hahatakatra na mitaky ny fiaran-dalamby, Manoro hevitra, na tsy manaiky seza Famandrihana.
Raha azo atao, miezaka ny hamandrika ny toerana, indrindra raha mandeha amin'ny Uber firenena malaza toy ny Frantsa, Italia na Espaina. Fa tena Nandeha lamasinina any Eoropa, ianao dia tsy takiana mba hamandrika ny toerana, na izany aza, niditra ny fiarandalamby sy ny fanantenana ho an'ny ny tsara indrindra Tsy hevitra tsara. Afaka holazaina mba avy amin'ny seza tapaky ny volana dia raha olon-kafa no namandrika azy. Amin'ny hamandrika ny toerana, dia afaka misafidy na tianao na varavarankely ny lalantsara fanaovam-panavotana. Azonao atao ny mipetraka indray ary mankafy ny Train mitaingina satria fantany ianao, dia tsy ho tapaka hifindra.
Ataovy azo antoka ny fananany
Nandeha lamasinina any Eoropa dia fantatra ho toy ny fomba azo antoka indrindra mba handeha. Na izany aza, dia zava-dehibe ny mitandrina ny maso ho an'ny pickpocketers, indrindra amin'ny fiaran-dalamby izay mijanona eo amin'ny tanàn-dehibe. Aza miala ny entana niambina ny lamasinina, na ao amin'ny peo. On alina fiarandalamby, raha mikasa ny hatory, ho azo antoka ny fiarovana entana ho any amin'ny fitoeran'entana amin'ny bisikileta kely hidin-trano. Tsy mety raha fiadanan-tsaina, manao ny andilany ny entana eo ambanin'ny akanjo mba hitandrina ny pasipaoronao, telefaonina antontan-taratasy manan-danja ary tsy voaaro avy amin'ny mety ho mpangalatra.
Latsaky kokoa – toro-hevitra noho ny mandeha lamasinina any Eoropa
Going avy firenena ny firenena na ny tanàna dia mahafinaritra sy mampientanentana dia. Na izany aza, Mety ho lasa ilay dia mandreraka raha mitondra ny enta-mavesatra. Ny entana tena ilaina ary avelao izay zavatra na vokatra izay tsy ilaina aoriana.
Arakaraka ny fiaran-dalamby mandeha ianao ao amin'ny, dia mety ho voafetra ny toerana fitahirizana ao ny seza racks sy ny talantalana, rehefa mandeha lamasinina any Eoropa. Raha tokony ho mitondra lehibe sy mavesatra valizy, ny toetra kitapo maivana no fomba hafa mba hanamaivana ny enta-mavesatrao.
Nandeha lamasinina any Eoropa dia manome mampitolagaga hevitra; na izany aza, dia hevitra tsara mba hitondra zavatra manan-danja vitsivitsy mba hanampy anao handeha ny fotoana indrindra raha ianao no nirotsaka an-tany hafa mihoatra ny 2 ora. Mamaky boky, mijery sarimihetsika amin'ny takelaka, Soraty ao amin'ny diarinao na Travel-dresaka amin'ny hafa sy eo anatrehan'ny mpandeha fantatrao izany no hatao amin'ny manaraka toerana halehany.
Most trains have either a restaurant, Cafe kalesy na sakafo maivana sarety izay tonga avy amin'ny fivarotana mofo voasesika, zava-pisotro malefaka sy ny maro hafa. Fa raha mandeha mafy amin'ny teti-bola, na ianao manokana sakafo fepetra, ka ilaina ny hitondra tsakitsaky miaraka anareo mandritra ny dianareo.
Mieritreritra ny mandeha lamasinina any Eoropa? Mandeha Vonjeo Lamasinina-tserasera izay hijery manokana ny manjo rehetra sy ny manaraka manomboka mieritreritra traikefa nahafinaritra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ru ny / en na / de sy ny maro hafa fiteny.
fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra traveltips